Olana goavana any Shily noho ny fiakaran'ny vidin'ny metro
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Olana goavana any Shily noho ny fiakaran'ny vidin'ny metro
Misy olana any Chile aorian'ny fahafatesan'ny olona roa tamin'ny fihetsiketsehana mahery vaika noho ny fiakaran'ny vidin'ny metro. Olom-pirenena sosotra iray no nibitsika hoe: “TSY ny media manerantany no miresaka momba izany. Sambany nanomboka ny fitondrana jadona tamin'ny taona 1980 dia niverina an-dalambe ny miaramila ary manome sazy ny herisetra amin'ireo mpanao fihetsiketsehana izy ireo ary mamono ny a. Retweet tsotra iray kosa dia mety hamonjy ain'olona. Ataovy handrakotra izany ny media. ”
Ny fihenan'ny korontana dia nateraky ny fiakaran'ny saran-dalan'ny metro, izay nitombo hatramin'ny 800 ka hatramin'ny 830 peso (1.13 $ ka hatramin'ny 1.17 $) ho an'ny dia an-tampon'ny ora, taorian'ny fiakarana 20-peso tamin'ny volana Janoary.
Nanambara ny filoha Pinera ny sabotsy fa nampiato ny fiakaran'ny vidim-piainana izy, taorian'ny nanidiana ny rafitra metro iray manontolo ny andro talohan'izay tamin'ny alàlan'ny fihetsiketsehana nandoro sy nanimba ny gara am-polony maro, namela ny sasany ho may tanteraka.
Hoy ny bitsika iray hafa: “Ny polisy shiliana dia manao takalon'aina amin'ny olona ao amin'ny fivarotana lehibe.”
“Mijoro miaraka amin'ilay mpianatra sy ny olom-pirenen'ny Shily izay manohitra ny fanaovana ampihimamba ny fitateram-bahoaka, ny angovo ary ny kapitalin'ny fahantrana. ”
Ny mpanao fihetsiketsehana tany Silia dia nandoro ny foiben'ny orinasa mpamokatra herinaratra izay te hampiakatra ny vidiny. Toy ireo vidin-javatra sy fiakarana hetra hafa rehetra ao Shily, ny olona tena mahantra no tena voa mafy. Marary izy ireo amin'izany.
Hoy ny mpamaky iray tamin'ny eTN: “Eto Shily (tanindrazako), marary ny vahoaka amin'ny kolikoly sy ny fanararaotana ataon'ny mpanao politika, ny polisy ary ny tafika. ”
Bitsika iray hafa: “Ry zalahy. Jereo. Ity no zava-mitranga any amin'ny fireneko rn. Miditra amin'ny tranon'ny olona tsy manan-tsiny ny polisy mba hamono sy handrava ny zava-drehetra. Azafady zarao izay azonao atao mba hampahafantatra an'izao tontolo izao. ”
Sands Resorts Macao dia manolotra toerana fitsangatsanganana tsy hay hadinoina ho an'ny mpitsangatsangana amerikana
Nifindra tany Ouganda ny fianakaviana goraganda Rwanda: tokony hitandrina ireo mpitarika ny valan-javaboary